EML FILE ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို - အစီအစဉ်များ - 2019
EML file ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျအီးမေးလ်ပို့လိုလျှင်ပူးတွဲ EML file ကိုတို့သညျ လာ. သင်ဤလက်စွဲစာအုပ်အတွက်ကြောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့အဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူးဆော့ဖျဝဲ၏အကူအညီဖြင့်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုသုံးပြီးမရှိဘဲဤလုပ်ဖို့တချို့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
သူ့ဟာသူအသုံးပြုပုံဖိုင်တစ်ဖိုင် EML ယခင်က e-mail, client ကိုအားဖြင့်ရရှိသော e-mail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကို (ပြီးတော့သင်ကမှပို့), Outlook သို့မဟုတ် Outlook Express ကိုအများစုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, attachment များကိုကဲ့သို့စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံနှင့်တူသောင်နိုင်ပါသည်။ ။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ winmail.dat file ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
EML format နဲ့ဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်ကို
ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင်း EML ဖိုင်ပေးထား - ဒီက e-mail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုက E-mail ကိုများအတွက် client program တစ်ခုကို အသုံးပြု. ဖွင့်နိုင်ပါသည်ယူဆယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခေတ်နှင့်အမရှိတော့ထောက်ခံကြောင့်ငါ, Outlook Express ကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါကြောင့်မှာအားလုံးမဟုတ်ပါနှင့် paid ဖြစ်ပါတယ် (သို့သော်သူတို့ကိုများ၏အကူအညီဖြင့်သင်တို့သည်ဤဖိုင်များကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည်) ရှိသောကွောငျ့ဖွင့်ငါကို Microsoft Outlook နဲ့အကြောင်းကိုရေးဖို့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဆိုပါအခမဲ့ Mozilla Thunderbird ပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့်အတူစတင် download လုပ်ပါနှင့်သင်တရားဝင် site ကို //www.mozilla.org/ru/thunderbird/ ကနေတတ်နိုင်သမျှကြောင်း install လုပ်ကြပါစို့။ ဒါဟာအီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပါနှင့်ထံမှ attachment များကိုကယ်တင်သည်, ရရှိလာတဲ့ပွင့်လင်း EML ဖိုင်အပါအဝင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်သုံးပြီးလူကြိုက်အများဆုံးအီးမေးလ်ကဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
program ကို install လုပ်ပြီးနောက်ပေါ်တွင်သင်စာလုံးဖွင့်လှစ်ထူထောင်ရမည်ဖြစ်သည်တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် (သင်ဖိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအပါအဝင့်ကိုကမ်းလှမ်းတာဖြစ်ပါတယ်အခါတိုင်းအရှုံးမပေး, သင်မှန်မှန်ပြုလုပ်သုံးစွဲဖို့စီစဉ်ထားကြဘူးတယ်ဆိုရင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုမေးရန်၎င်း၏အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးပေမယ့်ပါလိမ့်မယ် တကယ်တော့အားလုံးပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ဒါ) ။
Mozilla Thunderbird မှ EML ဖွင့်လှစ်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း:
ညာဘက်အပေါ်ကို "Menu ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, select လုပ်ပါ "ဟုအဆိုပါကယ်တင်ခြင်းသို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်ပါ။ "
သငျသညျဖွင့်ချင် eml ဖိုင်လမ်းကြောင်းကို Specify, သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစိတ်ကြိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၏အသွင်အပြင်ကိုတက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ထိုနည်းတူစွာ, သင်သည်ဤ format နဲ့အခြားလက်ခံရရှိခဲ့သောဖိုင်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Program ကိုအခမဲ့ EML Reader ကို
သငျသညျတရားဝင်စာမျက်နှာ //www.emlreader.com/ မှဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အခမဲ့ EML Reader ကို - မေးလ် client ကိုမရဖြစ်ပြီး, EML ဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်အခြားအခမဲ့ပရိုဂရမ်
သငျသညျကိုအသုံးပြုရန်ခင်မှာသင်တစ်ခုလုံးကိုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် drive ပေါ်တွင်ရှာဖွေမှုကို run မယ်ဆိုရင်ငါမဟုတ်ရင်, တစုံတယောက်သောသူသည် folder ထဲမှာဖွင့်လှစ်ဖြစ်, အဲဒီနောက်အစီအစဉ်ကိုအင်တာဖေ့စ၌ရှေးခယျြပါနှင့် "ရှာရန်" ခလုတ်ကိုကလစ်ရန်သူအပေါင်းတို့ကို EML ဖိုင်တွေကော်ပီကူးရန်သင့်အားအကြံပေး ကို C, ဒီဟာအလွန်ရှည်လျားအချိန်ယူနိုင်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားသော folder ထဲမှာ EML ဖိုင်တွေရှာဖွေပြီးနောက်, သငျသညျစာသားကိုဖတ်ပါနှင့် attachment များကိုကယ်တင်ပုံမှန် e-mail, မက်ဆေ့ခ်ျများ (ပုံရိပ်မှာကဲ့သို့) အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည့်, အဲဒီမှာတွေ့ရှိခဲ့သည်ကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျများစာရင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ပရိုဂရမ်းမင်းမပါဘဲ EML file ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
လူများအဘို့အပင်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်သည့်အခြားသောလမ်းရှိ - သငျ (နှင့်လူတိုင်းနီးပါးရှိပါတယ်အကောင့်တစ်ခုရှိပါတယ်) EML မေးလ် Yandex မှတဆင့်အွန်လိုင်း file ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်တဲ့ web interface မှတစ်ဆင့်သွားပါ, (နှငျ့သငျရုံသီးခြားစီဖိုင်များကိုရှိပါက, သင်စာတိုက်မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကသူတို့ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်) ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်၏မေးလ် Yandex အပေါ် EML ဖိုင်များမှလက်ခံရရှိပေးပို့, သင်အထက်တွင်ပုံရိပ်မှာတူရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှု: လက်ခံရရှိတဲ့သတင်းစကားအတွက်ပူးတွဲ EML ဖိုင်တွေပြသပါလိမ့်မည်။
သင်တို့သည်ဤဖိုင်များကိုမဆိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအခါ, တစ်ဦးဝင်းဒိုးကိုသင်တဦးတည်းကလစ်အတွက်ရှုမြင်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာမှဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ကြောင့်အတွင်းပိုင်းဖြစ်ကြောင်းစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် attachment များကိုအတူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: How To Open .EML Files Tutorial - What Program Open EML Email (စက်တင်ဘာလ 2019).